Unashamed သြစတြေးလျပြန်လည်စုစည်းမှု — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ရက်သတ္တပတ်တစ်စုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့ငါတွေကလည်းလျော့ရဲရဲကနေချွတ်နှင့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးပြည်သူပြည်သားအချို့နှင့်အတူကမ္ဘာ၏အခြားဘက်ခြမ်းမှခေါင်းနှစ်လုံး. Tedashii, Pro ကို, KB, Thi'sl, DJ သမား PDogg, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်မန်နေဂျာ Steadman, ငါသညျယရှေုကိုဝတျပွုဖို့သြစတြေးလျမှခေါင်းနှစ်လုံးခဲ့သည်.
ကျွန်တော်တို့ဟာဘရစ္စဘိန်းတဆင့်ခရီးသွားလာအောက်တွင်နှစ်ပတ်ကဆင်းကုန်, မဲလ်ဘုန်းမြို့, ပါ့သ, နှင့်ဆစ်ဒနီ. မြို့အသီးအသီးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ထံမှအထိကြီးမားသောဖျော်ဖြေပွဲ၏တစိတ်တပိုင်းခဲ့ကြ 5,000-10,000 လူငယ်များ. ထိုဖျော်ဖြေပွဲခင်မှာ, ငါတို့သည်အချို့သောကျောင်းများမှ သွား. ပြသသူတို့ကိုထွက်ကိုဖိတ်ကြား. အဘယျသို့ကျနော်တို့ကျောင်းတွေအများအပြားမှာပြောခွင့်ပြုခဲ့သည်ကန့်သတ်ခဲ့ (သူတို့ Non-ခရစ်ယာန်ပြည်နယ်ကျောင်းများခဲ့ကြသောကြောင့်,), ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုအားပေးနှင့်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုထောက်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပြု.
ထိုဖျော်ဖြေပွဲမှာ, ကြှနျုပျတို့အားလုံးငါးယောက်ဗရုတ်တဦးအဖြစ်အဆင့်ထိ, unashamed သင်္ဘောသား. ကျွန်တော်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုလုပျဆောငျဖို့လှုံ့ဆျောသောဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးအဲဒီအဆင့်လှု. ကျွန်တော်တို့ရှေးရှေးယရှေုသညျသိလိုဘာမှထက်ပို! ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသေချာပါရှေးရှေးသဘောကျပြီးထွက်သွားအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ, မကျနော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်, ဒါပေမဲ့ငါတို့သခင်အားဖြင့်.
ကျနော်တို့ဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့တိုင်းပြည်ကနေယုံကြည်သူများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့တယ်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူ, ကြှနျုပျတို့ပွုတူညီသညျယရှေုခစျြတဲ့သူမတူညီတဲ့နောက်ခံကနေ. ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများသွား၏ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုမှာဘုရားသခငျ၏အစီအစဉ်၏သတိပေးနေပါသည် “သောလူမြိုးထဲကမိမိကိုမိမိတစ်ဦးလူတို့အဘို့ရွေးနုတ်ဖိုး။” ဘုရားသခငျသညျအလုပျမှာဖြစ်ပါတယ်, မင့်ကဒီမှာ, ဒါပေမယ့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်, ရှေးရှေးချွေတာနှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့ထိုသူတို့သုံးပြီး.
ငါတို့သည်လည်းသြစတေးလျလိုက်တယ်စကားပြောသိရှိ. သူတို့ကငရုတ်ကောင်းမခေါ် “capsicum” သူတို့ကလက်သုတ်ပုဝါကိုပဌနာ “လက်သုတ်ပုဝါ။” ဘာ!? ကျွန်တော်တို့သော်လည်းလွန်းစကားပြောသူတို့ကထင်… လူအားလုံးတို့သည် dudes ဂျပိန်ဂျင်းဘောင်းဘီအဖျားခတ်ခဲ့ကြသူတို့ကသေးသေးလေးကားတွေအများကြီးမောင်းထုတ်. ကျောင်းသားတချို့က Thi'sl သိပ်အရေးမကြီးပေမဲ့ထင် (သူတို့ကသူသေဆုံးခဲ့သည်မသိ!) သူတို့ကငါ Wow လေးထင် (ငါ့ proudest အခိုက်). ကတက်သည်ဖြစ်စေကျနော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အချို့အချို့သောအရသာသြစတေးလျ BBQ အပ်, သိုးသငယ်တကောင်နှင့်အတူ, ကြက်သား, နှင့်ပင်အချို့သောသားပိုက်ကောင်. ဒါဟာကောင်းတဲ့ခဲ့သည်!
အချို့သော BBQ သားပိုက်ကောင်စားသောက် This'l
သြစတြေးလျ၌ငါ့အချိန်ရဲ့အထူးများ၏တဦးတည်းငါ့ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူကကန်ဖို့ရတဲ့ခဲ့သည်. မိဿဟာရတတ်၏, ဆက်ဆံရေးကိုနက်ရှိုင်းခဲ့ကြ, ငါဘုရားရေးရာစကားပြောဆိုချက်အားဖြင့်ဆောခဲ့သည်. ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြောင်းကိုကောင်းသောစကားပြောဆိုချက်တွေကိုမှတ်မိနိုင်, ဝန်ကြီးဌာန, fatherhood, ဂီတ, စသည်တို့ကို. ဘုရားသခင့ကောင်းသောအကျင့်ကိုငါ့အပေါ်သို့ဆွဲဆောင်လာခဲ့ပါတယ်နှင့်ပိုပြီးကိုယ်တော်ကဲ့သို့ငါ့ကိုလုပ်သူကဲ့သို့စကားပြောဆိုချက်တွေကိုကိုအသုံးပြုသည်. ငါအဆိုတော်တွေနှင့်အတူပူးတွဲအလုပျလုပျခံရဖို့ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်, DJ သမားရဲ့, စစ်မှန်စွာသညျယရှေုကိုချစ်သောသူနှင့်ခရီးသွားမန်နေဂျာ.
ငါကဖြစ်ပျက်လုပ်ကူညီခဲ့သူကိုဝန်ကြီးဌာနများအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်, မြတ်သောဧညျ့ပြသောကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်, နှင့်ဖျော်ဖြေပွဲမှလာသောထောက်ခံသူတွေ. လာမယ့်အချိန်မရောက်မှီ, ငါတို့သည်သင်တို့သြစတေးလျကိုချစ်!